Vyseivaya टमाटर को बीउ बिरुवा वा तयार खरीद, माली राम्रो फसल भेला गर्न सपना। टमाटर ख्याल - सजिलो छैन। हासिल गर्न उच्च पैदावार गलिशिआ मदत। बीउ चयन को चरण मा मामला गर्न जिम्मेवार दृष्टिकोण। यस दिन मा ग्रीनहाउस भित्र उच्च तापमान रोगहरु को विकास र किरा को उद्भव कारण। त्यसैले तपाईं रोग प्रतिरोधी संकर किसिमहरु ध्यान गर्नुपर्छ। सीमित वृद्धि संग टमाटर ग्रीनहाउस अवस्था लागि ठूलो छ 3-4 महिना, भित्र पकाना। प्रत्येक बोट संग 14 हात सम्म जम्मा गर्न व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। असीमित वृद्धि संग प्रजातिहरू थप पकने समय आवश्यक तिनीहरू प्रारम्भिक मई मा लगाए गर्नुपर्छ। धेरै बिरुवाहरु सम्भव चिसो सहन गर्न सक्दैन।
तपाईं ग्रीनहाउस मा टमाटर हेरचाह कसरी निर्णय गर्नु अघि, तपाईं कहाँ यो स्थापित गरिनेछ निर्णय गर्नै पर्छ। यो गति पकने देखि निर्भर गर्दछ। पेड र shrubs मुक्त भाग चयन, र यो पश्चिम गर्न पूर्व को दिशा मा एक ग्रीनहाउस मा ठाँउ हो। यस मामला मा, बोट हल्का र गर्मी अधिकतम रकम प्राप्त गर्नेछ। यो टमाटर जस्तै रोग छ देखि, आलु अन्तिम वर्षमा हुर्किसकेका छन् जहाँ भूमि मा Greenhouses स्थापना जोगिन।
कसरी ग्रीनहाउस मा टमाटर हेरचाह गर्न? पहिलो बिरुवा लागि तापमान 32-33 ° C को हेरविचार, कम चिस्यान र वेंटिलेशन लिन। रात मा, थर्मामीटर तल 15 ° सी गिर हुँदैन र तापमान 6-8 ° C पुग्छ भने, बोट बिरामी प्राप्त गर्नेछन्। जब चिस्यान क्रप लागि हानिकारक छ 70%, र एक थर्मामीटर सूचक 35 ° C आत्म-pollinated टमाटर, नाघ्यो। को ग्रीनहाउस को परिधि र छत बनाउन-अप मा airing लागि। को चिस्यान स्तर निरन्तर संरचना को अन्त्य को माथिल्लो भाग मा एक सानो वेंट खोल्न कारण नियन्त्रित छ। यो ग्रीनहाउस पानी को ठूलो व्यारेल राख्न उपयोगी छ। दिन को समयमा तिनीहरूले अतिरिक्त गर्मी जम्मा गर्ने र राति यसलाई जारी, र न्यानो पानी, तपाईं बिरुवाहरु जल गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी ग्रीनहाउस मा टमाटर लागि तुरुन्तै उतरने पछि हेरचाह गर्न? एक तार ट्रेल्लिस कोड गर्न बिरूवा टाई। धातु ट्यूब हरेक 2-2.5 मिटर मा यस प्रकारको लागि र तिनीहरूलाई तार को 4-5 पङ्क्तिहरू पुल, र जो टमाटर को वृद्धि संग संलग्न छन् गर्न। गीला राम्रो मा प्लान्ट बिरुवा र मौसम सुन्दर छ, विशेष गरी यदि 1-2 हप्तासम्म पानी गर्छन्। टमाटर zavyazhutsya पहिलो फल, को वेल्स मा भूमि सुक्खामा छैन अप पर्याप्त सम्म पानी धेरै आवश्यक छैन।
फल राखे गरिनेछ जब ग्रीनहाउस मा टमाटर लागि कसरी ख्याल गर्ने? पर्याप्त परिमाणमा पानी। चिस्यान को कमी Rot गर्न सक्नुहुन्छ, शिखर र अतिरिक्त - जरा सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो। टमाटर पानी हाले किनभने पानी बोट को पात मा हुन्छ जब बिरामी हुनेछ, मूल मा।
तिनीहरूले चाँडै पाकेको हुनुहुन्छ टमाटर लागि कसरी हेरचाह गर्न? यो ब्रश को गठन सामना गर्न आवश्यक छ। यो के गर्न सही उचाइ मा बिरुवाहरु को भन्दा माथि बाहिर चिमोटे, छेउमा मार पात रोक्न भनेर हटाउन र fetuses संख्या सीमित। स्टेम पकने टमाटर को लोड वृद्धि अन्तर्गत तोड्ने सक्छ, त्यसैले बाला समयमा सुरक्षित हुनुपर्छ।
यी सरल नियमहरू प्रदर्शन आवश्यक एक बाउनटिफूल बाली परिणाम।
कताई "Qaeda" - एक सजिला गियर
Kolomna डीजल लोकोमोटिव प्लान्ट तिनीहरूलाई। वी वी Kuybysheva
महिला कोट: लोकप्रिय मोडेल। के महिला र raincoats को प्रकार?
बहीखाता - व्यवसायीक मदत।
Superheroes बारेमा सबै भन्दा राम्रो चलचित्र: सूची